Nhau - Zvakawanda zvekurongedza zvinogadzirwa negirazi kana acrylic？
Mazhinji emapakeji akagadzirwa negirazi kana acrylic. Nekudaro, mumakore achangopfuura, isu takawana akawanda uye akawanda marongedzero ezvekushambadzira pamusika achishandisa petiri lotion mabhodhoro.
Saka nei peturu lotion kurongedza kwakakurumbira? Chekutanga pane zvese, girazi kana acrylic lotion bhodhoro rinorema kwazvo, uye huremu hahukwanisi kuita. Sezvo vechidiki vanofamba zvakanyanya, hombodo yekuzora bhodhoro package iri nyore kutakura. Iyo zvakare inotakurika. Kechipiri, nekukwira kwekutenga pamhepo, mabhodhoro ezizoro anowanzopwanya uye mamwe mamiriro panguva yekufambisa, nepo mabhodhoro ezvechipfuwo ari kupwanya-kusagadzikana, uye kurovera uye kuburitsa panguva yekufambisa hazvizokonzere matambudziko sekutyora nekudonha.
Kamwe zvakare, peturu mafuta echirongo kuputira iri nyore kuita uye yakaderera mumutengo, saka zvakare inozivikanwa. Ndeapi nyaya andinofanira kutarisisa kana ndichiisa? Chekutanga ndechekuti iko iko chinhu chinhu chitsva. Vamwe vagadziri vemapurasitiki ekuvhuvhuta vanozoshandisa iyo yechipiri zvinhu kugadzirisa peturu lotion bhodhoro, izvo zviri pachena zvinokanganisa mhando yeiyo emulsion. Naizvozvo, kutarisisa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kune zvakasvibirira zvigadzirwa zvakagadzirwa nevanozora bhodhoro vagadziri. Pamutengo wechipiri, mabhodhoro ekuzora anoshandiswa muhuwandu hwakawanda, saka unofanirwa kudzora mutengo zvakanyanya sezvinobvira kana uchihodha. Naizvozvo, mukuita kwekutenga, isu tinofanira kuedza nepatinogona napo kuenzanisa mitengo. Chechitatu kudzikama kwekugoverwa kweanogadzira emulsion mabhodhoro ekugadzira, uye kuendesa panguva yakakodzera kwakakoshawo kune yekupedzisira nhanho yemugadziri weemulsion. . Kazhinji, peturu lotion kurongedza kune zvakawanda zvakanakira uye ine simba rekusimudzira kugona uye kukwikwidza mumusika.
Cream zvirongo zvizorwa kavha, Zvizorwa Poda Container Ine Sifter, Zvizorwa Cream chirongo, Zvizorwa Cream Midziyo, Ziso Cream Jar, Nhema Bhodhoro Gel Polish,